Shina Nonwoven For pabrik sy orinasa mpanamboatra | ShiningPlast
Manana andalana 6 amin'ny spun-bonding an'ny PP ho an'ny famokarana lamba tsy misy tenona isika miaraka amin'ny fahaizana mamokatra lamba tsy misy lamba amin'ny loko sy habe samihafa ary 8 ka hatramin'ny 250gsm ary 3.2m (halavany) amin'ny sakany, ny fahafaha-taona isan-taona dia hahatratra 12000 t.
endriny: Paosy / lambam-baravarana manjaitra / fanjaitra.
ShiningPlast dia mifantoka amin'ny famokarana lamba Landscape mandritra ny taona maro. Mihazona hafanana ny zavamaniry sy afaka milentika moramora. Ary koa, manakana ny tsimparifary tsy hitombo amin'ny halotoina. ShiningPlast fanamainty / jiro mifehy ny ahi-maintso dia manana tanjaka matanjaka, mateza ary fananana tsara fako. Izy io koa dia manana tahan'ny fifamoivoizana avo ary mijanona ho tanjon'ny fampiasana maharitra. ShiningPlast nonwoven dia manana fametahana fibre be mihitsy ary mety hahatsapa ny hoso-doko samihafa ianao.
Izahay dia mamokatra vokatra toy ny lamba vita amin'ny hydrophilika, tsy lamba vita amin'ny lamba, miady amin'ny lamba tsy vita tenona, lamba antitra tsy antitra, lamba antokony tsy natao tenona, lamba antistatic non-woven sns .; mamokatra fonosana zavamaniry tsy lovenina izahay, fonosana miaro ny ranomandry, lamba fitaovam-piadiana, lamba vita amin'ny masoandro, kitapo ara-tsakafo, ary kitapo voajanahary. Ireo vokatra ireo dia be mpampiasa amin'ny horticulture, zaridaina ary fambolena; Ny haavon'ny lamba lehibe indrindra dia mety ho 20 metatra amin'ny fatorana ultrasonic sy ny fatorana lakaoly, izay mora manome fahafaham-po ny filan'ny toeram-pambolena sy ny kijana.
· Fleece zaridaina
· Saronana fiarovana
· mpiangaly arin-javaboary
ShiningPlast lamba lamba dia mateza sy matanjaka. Afaka mamokatra karazana SS koa izahay.
Ny lanjan'ny hazavana amin'ny ankapobeny dia tena mora entina.
Previous: Nonwoven For Horticulture
Manaraka: Lumber Warp / Hood